China Sdatium Ìhè China Manufacturers & Suppliers & Factory
Sdatium Ìhè - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Sdatium Ìhè)
450 watt LED stadium ìhè aka
450 watt LED stadium ìhè aka Na SMD 3030 LED, nke a 450W Baseball Field Lights na- emepụta ruo 58500lm elu na-enwu (1200W Ebube Kwesịrị Ekwesịrị) ma zọpụta 88% na ọkụ eletrik nke ọkụ. Egwuregwu Mkpụrụ Egwuregwu Baseball anyị bụ onyinyo n'enweghị onyinyo ma na-egbukepụ ọkụ, na-enye ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ nke ọma ma...
IP65 20W 30W 50W Ìhè anwụchịrị ọkụ
Ìhè Ihu ọkụ anyị 50w nwere ike ịmịpụta ihe ruru 6000lm. Ìhè Ìhè nke A Nke 30w bụ ndị nnọchi ntụgharị zuru oke maka 100W halogen bọlbụ. Ìhè ae nwetara n'okwute ọkụ nke 20w nwere mgbanaka igwe anaghị arụ ọrụ, nke kwụsiri ike ma nwee ntụkwasị obi, can nwere ike iwunye ngwa ngwa ịchọrọ. Site na ntufu IP66, oke mmiri...
Ìhè Light Led 200 Watt 24000lm 5000k
Ìhè Ihu Igwe anyị 200 Watt nwere ike ime ka ihe dị ọhụụ ruo 24000lm. Ìhè Igwe mmiri a 200w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ kwekọrọ.The Light Flood Light 200w Watt ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na ntukwasi obi,, nwere ike iwunye ihe nkuku ị choro. Site na ntulee IP66, oke ide mmiri anyị 250 watt...
Sdatium Ìhè 960W Led Stadium Ìhè Osimiri Ìhè Led Pizza Ìhè Costco Ìhè Mgbachi nke Ìhè Led Bulb Ìhè E40 Ìhè Ìhè